Muxuu ka yiri tababare Guardiola guuldarradii lama filaanka aheyd ay kala kulmeen Wolverhampton?? – Gool FM
(Manchester) 06 Oct 2019. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay guuldaradii xanuunka badneyd ee maanta ka soo gaartay kooxda Wolverhampton.
Kooxda Manchester City ayaa dhagta ciida loo daray kaddib markii loogu awood sheegtay 0-2, kulan xiiso badan ay ku wada ciyaareen Wolverhampton Etihad Stadium, waxaana 2-da gool ka dhaliyay Sky Blues xiddiga lagu magacaabo Adama Traore.
Haddaba Pep Guardiola ayaa guuldarada xanuunka badan ay kala kulmeen kooxda Wolverhampton wuxuu la hadlay saxaafada wuxuuna yiri:
“Waxay ahayd maalin xun, mararka qaar way dhacdaa”.
“Qeybtii labaad waxaan si buuxda u xakameynay ciyaarta, laakiin ugu danbeyntii weerarkeena oo ay ciyaartoyda horay u dhaqaaqeen, waxaan kubaddaha ku luminay xaalado aad u adag, waxayna ahaayeen kuwo leh go’aan qaadasho fiican”.
“Waxaan kubadda ku garaacnay birta, laakiin qaabkii aan u ciyaarnay ma aheyn mid fiican, ma ahayn maalin wanaagsan”.
Intaas kaddib Pep Guardiola ayaa wax laga weydiiyay fikirkiisa kaga aadan in 8 dhibcood ay ka hooseeyaan hogaamiyaasha horyaalka ee Liverpool wuxuuna ku jawaabay:
“Waan ka wada hadalnay dhalin yarada, waxaa weli haray kulamo badan aan ciyaari doono, waxaan sameynay xilli ciyaareedkii hore, waana sameyn doonaa mar kale”.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Barcelona Iyo Sevilla ee horyaalka La Liga